ANTENIMIERAM-PIRENENA : Miroso ny dingana hamoahana an’ireo Depiote any am-ponja
Nisy ny fehin-kevitra noraisin’ireo solombavambahoaka momba ny ho avin’ireo Depiote voatazona any am-ponja, ny zoma lasa teo. 3 décembre 2019
Tapaka tamin’io fotoana io fa hisy ny taratasy misokatra halefa ho an’ny Praiminisitra lehiben’ny Governemanta, Ntsay Christian sy ho an’ny Fitsarana amin’ny fampitsaharana ny fanenjehana sy ny fihazonana am-ponja an’ireo solombavambahoaka mirahalahy any am-ponja, ankehitriny.
Anisan’izany ny Depiote Raveloson Ludovic, voafidy tao anatin’ny Distrikan’i Menabe sy ny Depiote Rasolomampionona Hasimpirenena, voafidy tao anatin’ny Distrikan’i Fandriana. Ity farany raha tsiahivina fohy dia anisany voarohirohy tamin’ny raharaha famarotana ny Villa Elisabeth izay nipetrahan’ny Filoha teo aloha, ny Profesora Zafy Albert. Herinandro maromaro nialoha ny nanatanterahana ny fifidianana solombavambahoaka izay tanteraka tamin’ny volana mey lasa teo ny tenany no naiditra am-ponja taorian’ny famotorana savaranonando nataon’ny mpitandro filaminana.
Hatreto mbola tsy nisy ny fanapahan-kevitra mahakasika azy nivoaka teo anivon’ny Fitsarana misahana ny ady amin’ny kolikoly. Ity farany mantsy no voalaza fa mandray an-tanana ny raharaha nahavoasaringotra azy. Manoloana izany indrindra no isian’ny dingana hataon’ireo Depiote namany eny Tsimbazaza, mba hahafahan’izy ireo manatanteraka ny asa maha solombavambahoaka azy sy mamonjy ny lapan’ny Antenimieram-pirenena. Ho an’ny Depiote Raveloson Ludovic kosa indray dia fantatra fa nivoaka ny fonja ary manatanteraka asa ivelan’ny fonja na “main-d’oeuvre pénale” (Mop) ny tenany ankehitriny rehefa nahazo fankatoavana tamin’ny tompon’andraikitra isan’ambaratongany.
Ny tranga nahazo ity olom-boafidy voafonja teo anivon’ny fonjaben’i Morondava ity dia fantatra fa tsy mbola misy ifandraisany amin’ilay fanapahan-kevitra noraisin’ny solombavambahoaka teny Tsimbazaza, ny zoma lasa teo. Araka izany, dia andrasana izay valin-teny avy amin’ny Praiminisitra lehiben’ny Governemanta sy ny Fitsarana mahakasika io taratasy fangatahana nalefan’ny solombavambahoaka io. Ankoatra ny didim-pitsarana dia heverina fa anisany iankinan’ny ho avy politikan’izy ireo ny fanapahan-kevitra avy amin’ny fanjakana.